राज्यलाई कर तिर्नु कुनै पनि देशका नागरिकका लागि दायित्व भन्ने बुझिन्छ । तर दुनियाँमा यस्तोपनि देश छ जहाँका नागरिकहरुले राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नु पर्दैन । जहाँका नागरिकहरुलाई जति कमाए पनि छुट छ । त्यसमा राज्यले कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउँदैन । यी हुन् ती देशहरु :
बरमूडा भौगोलिक हिसावले सानो देश हो । त्यहाँका नागरिकहरुले राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको कर बुझाउनु पर्दैन ।
ब्रुनाईमा पनि नागरिकहरुले कुनै पनि प्रकारको कर राज्यलाई बुझाउनु पर्दैन । त्यहाँ रोजगारमा संलग्न कामदारहरुको लागि एउटा छुट्टै ट्रस्टको स्थापना गरिएको छ र उनीहरुले त्यहीँ कमाइको निश्चित रकम बुझाछन् ।
३. संयुक्त अरब इमिरेट्स
संयुक्त अरब इमिरेट्स एक त्यस्तो देश हो जहाँका जति पनि धनी नागरिकले राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको ट्याक्स बुझाउनु पर्दैन । संयुक्त अरब इमिरेट्स तेलमा आत्मनिर्भर भएका कारण पछिल्लो केही दशकमै धनी राष्ट्रका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको देश हो ।
४. साउदी अरब
साउदी अरबमा पनि नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारको कर दिनु पर्ने व्यवस्था छैन । तर, त्यहाँ गएर व्यवसाय गर्ने प्रवासी व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत ट्याक्स बुझाउनु पर्छ ।
बहमासमा पनि कुनै पनि नागरिकले ट्याक्स बुझाउनु पर्दैन ।
तेलको अथाह भण्डार भएको देश कतारमा धेरै मानिसहरु अत्याधिक धनी छन् र पनि उनीहरुले कुनै पनि प्रकारको ट्याक्स राज्यलाई बुझाउनु पर्दैन ।
ओमान पनि तेलमा आत्मनिर्भर देश हो । त्यहाँ पनि राज्यले नागरिकसँग कुनैपनि प्रकारको ट्याकस लिने गरेको छैन ।
कुवेतमा पनि कुनै प्रकारको ट्याक्स सिस्टमबाट नागरिकहरु मुक्त छन् ।
यो देशमा पनि नागरिकहरु ट्याक्सबाट मुक्त छन् ।
बहराइनमा पनि राज्यले ट्याक्स लिदैन । तर, कर्मचारीहरुबाट भने उनीहरु इन्स्योरेन्सकालागि केही रकम राज्यले लिने गर्छ ।
← पानी होइन आगो र रगत बग्ने संसारका ७ अदभूत झरनाहरु
मान्छे र पेन्गुइनको यस्तो अनौठो प्रेम ? →